Messi ma gaari doonaa heerka uu gaaray Ronaldo? - BBC News Somali
Kooxda Juventus aad ugama aysan dhex muuqan tartanka naadiyada Yurub ee Champions League-ga, hase ahaatee waxay ku badbaadday Cristiano Ronaldo.
Cayaaryahanka weerarka uga dheeli jiray kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ayaa goolashiisa gaarsiiyey 125 oo uu dhaliyey 161 ciyaarood.
Waxa uu haatan 17 gool ka horreeyaa ninka uu xifaaltanku kala dhexeeyo ee Lionel Messi, haddaba weerar yahanka reer Barcelona - ee saddexda sano da' ahaan kayar Ronaldo, ma gaari karaa goolashaas?
Ronaldo oo 34 jir ah, ayaa markii ugu horraysay ee uu cayaaro Champions League-ga waxa uu 2003-dii u saftay kooxda Manchester United, hase ahaatee uma aanay u suurto galin in uu shabaqo soo taabto tan iyo 10-kii April 2007, markaas oo uu laba gool ka dhaliyey cayaartii kooxda Roma lagu xaaqay ee 7-1 ku dhammaatay.
Laba iyo toban sano kadib waqtigaas waxa uu noqday ninkii ugu horreeyey ee gaara 125 gool marka lagu daro goolkii quruxda badnaa ee uu xalay madaxa uga dhaliyey kooxda Ajax.
Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa wargayska Sky Sport Italia u sheegay: "Ronaldo waxa uu muujiyey heer gooni ah. Waqtigiisa iyo dhaqdhaqaaqiisuba way ka duwan yihiin sida dadka kale, - waxba lagama qaban karo".
"Waa cayaaryahan leh qaab cayaareed ka duwan kan cayaartoyda kale".
Ronaldo ayaa shan gool ka dhaliyey sideed cayaarood oo uu saftay xilli ciyaareedkaan.
Celceliskiisa goolasha ayaa ah 0.77 halkii ciyaar ee kasta ee uu u safto tartanka Champions League-ga.
Messi oo 31 jir ah, ayaa markii ugu horraysay tartanka Champions League-ga u saftay sanadkii 2004-tii, wuxuuna markii hore ka goolal badnaa Ronaldo. Intii u dhaxaysay sanadihii 2011-12-kii, Messi waxa uu tartankaas dhaliyey 13 gool.
Hase ahaatee celceliska goolasha Ronaldo ayaa sii kordhayey - intii u dhaxaysay sanadihii 2011 - 2018-kii, waxa uuna xilli ciyaareed kasta dhalinayey 10 gool - arrintaas oo ciyaaryahanka reer Portugal u fududaysay in uu hoggaanka goolasha qabto.
Messi ayaa 108 gool dhaliyey 132 ciyaarood oo uu saftay, celecliska goolashiisa ee ciyaar kasta ayaa ahaa 0.81.
Messi ayaa looga fadhiyaa in uu soo qabto Ronaldo - Messi ayaa waxaa u harsan in uu 21 ciyaarood oo dambe uu safto.
Haddii Barcelona ay gaarto kama dambaysta tartankan, iyo waliba xilli ciyaareedka dambe, Messi waxa uu qarka u saaran yahay in uu gaaro 125 gool marka la gaaro is reebreebka xilli ciyaareedka 2020-2022, markaas oo uu noqon doono 33 jir.
Waa arrin cajiib ah dabcan. Balse makuu muuqataa in Ronaldo uu mardhow cayaaraha ka fariisan doono?
Click to see content: currents
Waa maya Jawaabtu.
Weerar yahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa ah cayaaryahanka saddexaad ee ugu goolasha badan kaas oo wali aan kubadda ka fariisan.
Weerar yahanka 30 jirka ah ee Manchester City ee Sergio Aguero ayaa u baahan 89 gool si uu usoo qabto Ronaldo